စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Scope - CCIC စမ်းသပ်ခြင်း Co. , Ltd
တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးကို service provider ကအဖြစ်, (FCT အဖြစ်အတိုကောက်) ဖူ CCIC စမ်းသပ်ခြင်း Co. , Ltd ကမ်းလှမ်းမှုမဟုတ်မှသာ Pre-ထုတ်လုပ်မှုစစ်ဆေးရေးန်ဆောင်မှုများ , အ ဃ uring ထုတ်လုပ်မှုစစ်ဆေးရေးန်ဆောင်မှုများ နှင့် နောက်ဆုံးအဆင့်ကျပန်းစစ်ဆေးရေးန်ဆောင်မှု ဒါပေမယ့်လည်း ,factory စာရင်းစစ် ခြင်း, loading supervision ခြင်း, testing service, the certification of free sales and etc., meeting all of our customers' requirements thoroughly.
Fuzhou တွင်ရုံးချုပ်တည်ရှိပြီး Fujian ပြည်နယ်၏ Quanzhou, Putian, Dongshan, Longyan, Ningde, Sanming, Nanping တို့တွင်ရုံးခွဲများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်ဆေးရေးမှူးများသည်ရှန်ဟိုင်း၊ ဂွမ်ဒေါင်း, Zhejiang, Jiangsu ပြည်နယ်စသည်တို့တွင်တည်ရှိသည်။ စီးပွားရေးနယ်ပယ်သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိမြို့ကြီးများအားလုံးအတွက်.
FCT သည်အရည်အသွေးပြproblemsနာများကြောင့်စွန့်စားရမှုများကိုလျှော့ချရန်သက်ဆိုင်သောဥပဒေများ၊ စံနှုန်းများ၊ ကန်ထရိုက်များနှင့်အချို့သောစည်းမျဉ်းများအရထုတ်ကုန်ညီညွတ်မှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းများကိုဘက်မလိုက်သော၊ မျှတသော၊
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ folder ကို Download လုပ်ပါ
အတိအကျပြောရလျှင် FCT သည်အောက်ဖော်ပြပါထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးတွင်စစ်ဆေးခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊
လျှပ်စစ်နှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်း Hard Goods ကုန်ပစ္စည်းများ
အလင်း & အလင်းရောင်
ကြွေထည် & ကြွေထည်
Caps & Head-wear
စက်မှုပစ္စည်း စက်အစိတ်အပိုင်းများ Metal Sheet
ဓာတုဗေဒပစ္စည်း Mineral ထုတ်ကုန် များ Processed Grains Bakery Goods